SUPERBAHİS489 'FATİH TERİM'E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!' - RESTBET501.COM GİRİŞ
December 2, 2020 RESTBET 501 RESTBET501 14
ဂါလာစတာရီကလပ်ဥက္ကency္ဌအဖြစ်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုကြေငြာခဲ့သူအိုဇန်ကော့ကွတ်သည် TRT ရေဒီယို ၁ ၏ guest ည့်သည်ဖြစ်သည်။ Fatih Terim အားသူ၏ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကတိတော်၌အခွင့်အာဏာပိုမိုပေးသင့်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားပြီး Ozan Korkut မှအောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“Fatih ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ Galatasaray ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ပါ။ ကျွန်တော်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါ Galatasaray Sportif AS မှာသူ့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးချင်ပါတယ်။ နည်းပြအဖြစ်လည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ ဆရာရဲ့ငွေကြေးအခြေအနေကိုရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်၊ သမ္မတမဟုတ်ဘဲအားကောင်းသည့်သမ္မတသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ဂလာတိဆာရာအတွင်းမှလာသူသမ္မတသည်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးအဖွဲ့ရှိသည်။
Mustafa Cengiz ၏အုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းဝေဖန်သူ Ozan Korkut, “Mustafa Cengiz အုပ်ချုပ်ရေးကိုငါအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါစီမံခန့်ခွဲမှုကိုမထုတ်ခဲ့ဘူး။ ငါအထွေထွေညီလာခံထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်သုံးချက်ကိုပြောလိုက်တယ်။ Galatasaray ရဲ့အခြေခံမူများနှင့်အခွင့်အရေးများကိုကောင်းစွာကိုယ်စားပြုပါသလား။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဖော်ပြခဲ့တဲ့စီမံကိန်းများကိုဘယ်နှစ်ယောက်ပြုမိခဲ့ကြသလဲ 30 စီမံကိန်းများ၏သာအနည်းငယ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဝင်ငွေထုတ်လုပ်ပြီးမဟုတ်ပါကလွှဲပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုရေးဆွဲအနာဂတ်အစီအစဉ်ကဘာလဲ? ဤပစ္စည်းမလုံလောက်သောကြောင့်ငါကဖြန့်ချိမပြုခဲ့။ ငါအလုံအလောက်ငါကပြောသည်မည်သူမဆို, ဒါပေမယ့်အမှားတွေကိုပြင်ပေးဖို့ “ အသုံးပြုအသုံးအနှုန်းတွေ။
RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBOO868 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBABA138 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBOO618 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ SUPERTOTOBET0120 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ SULTANBET561 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ BETBABA100 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ
14 Comments on SUPERBAHİS489 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’
ELGİN December 2, 2020 at 11:10 pm
KraLiÇe December 4, 2020 at 12:50 am
MEHMET EVREN December 5, 2020 at 1:00 am
VAHDETTİN TALHA December 5, 2020 at 11:30 pm
HASAN December 6, 2020 at 6:10 am
HURİYE December 10, 2020 at 1:40 am
YILDIRAY December 10, 2020 at 2:10 pm
restbet casino ödemeleri nasıl bileniniz var mı? kayıt olmayı düşünüyorum.
SİMENDER December 11, 2020 at 3:10 am
KUTAN December 12, 2020 at 8:50 pm
YÜCE December 13, 2020 at 12:10 am
CÜNEYT December 14, 2020 at 2:40 am
TAYYAR ALP December 14, 2020 at 10:10 pm
restbet canlı casino yeni adresi bu oldu, bunu kullanın artık.
SONGÜL December 15, 2020 at 8:30 am
NURAY December 15, 2020 at 10:10 pm